Shirkii Nairobi ee dowlad Goboleedyada oo baaqday – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jun 13, 2019
Wararka ka imanaya Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa sheegaya in uu baaqday shir ay madaxda dowlad Goboleedyada ku yeelan lahaayeen Magaaladaasi.
Ilo ku sugan Nairobi ayaa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in shirkaasi baaqday islamarkaana Madaxda Jubaland iyo Galmudug ay kulamo kala gaar gaar ah la qaadan doonaan dadka ka soo jeeda degaannadooda iyo wakiillo beesha Caalamka ka socda oo ay si gaar gaar ah ula kulmayaan.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni oo ahayd in uu ka qeybgalo shirkaas ayaa hadda ku sugan Magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya.
Saraakiil ku dhow Xafiiska Madaxtooyada Puntland ayaa u sheegay Idaacadda Mustaqbal in Siciid Deni uu maalinta berri oo jimco ah dib ugu laabanayo Magaalada Garowe oo uu dhowr todobaad uga maqnaa safarro uu ku tagay dalalka Imaaraadka, China iyo Itoobiya.
Shirkan ayey dowlad Goboleedyada la lahaayeen Beesha Caalamka waxaana ay iclaamiyeen markii uu fashilmay shirkii lixda maalmood ka socdya Garowe una dhaxeeyay dowladda Federaalka ah iyo dowlad Goboleedyada.
Ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin waxa fashiliyay shirka Nairobi ay ku yeelan lahaayeen wakiillada Beesha Caalamka iyo Madaxweynayaasha Maamullada kala ah; Puntland, Galmudug iyo Jubaland.
Adam Ducaale oo baaq u diray Madaxweynayaasha Somaliya iyo Kenya